Budata WhatsApp n'efu maka ngwaọrụ niile | Gam akporosis
WhatsApp bụ ngwa ngwa ozi ngwa ngwa kachasị ewu ewu na ahịa, ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ gbanweela ụzọ anyị si agwa ndị anyị hụrụ n'anya, ndị enyi anyị na ndị nọ anyị gburugburu okwu. N'ihi usoro mwekota ya na akwụkwọ ekwentị, ọ ghọrọ ihe ewu ewu dịka ọkụ ọkụ, ọ bụ ya mere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ, mgbe ha nwetara Smartphone ọhụrụ, ihe mbụ ha chọrọ bụ ibudata WhatsApp n'efu, ka gị na ndị enyi gị wee nwee ike kpọtụrụ gị ngwa ngwa o kwere mee.
WhatsApp dakọtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sistemụ arụmọrụ niile, ma e wezụga na enwere nsụgharị desktọọpụ iji nwee ike iji ya ngwa ngwa na nkasi obi. Ndị ọrụ nwere ike izipu ozi, ozi olu, onyonyo, njikọ ibe weebụ, ma ọ bụ faịlụ n'ụdị dị iche iche.
Otu n'ime ọtụtụ nhọrọ WhatsApp bụ ihe dị iche iche nke ihe ruru mmadụ 256, ọnụ ọgụgụ buru oke ibu. Ohere ịmepụta na ijikwa ha dị mfe. Onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnweta ha site na ịkpọ oku ma ọ bụ site na ndị njikwa na-agbakwunye.
1 Etu esi ebudata WhatsApp n'efu
2 Budata WhatsApp APK
2.1 Nzọụkwụ mbụ nke nwụnye
3 Budata GBWhatsapp
4 Budata WhatsApp Aero
5 Budata WhatsApp
6 Mee ka WhatsApp dị n'efu
Etu esi ebudata WhatsApp n'efu
Site na nkuzi anyi di mfe anyị ga-akụziri gị otu esi etinye WhatsApp na ngwaọrụ gị niile, yabụ ị gaghị echefu otu oge nke nkwukọrịta na nke gị:
Budata WhatsApp na ekwentị mkpanaaka
Download WhatsApp maka mbadamba
Ọbụghị naanị nke ahụ, mana anyị na-enyere gị aka ịwụnye ya n'efu. Anyị na-echeta na mgbe Facebook nwesịrị ya, ụlọ ọrụ WhatsApp Inc ewepụla ụdị ụgwọ ọ bụla maka iji ọrụ ya, ya mere, WhatsApp bụ n'efu.
Peeji WhatsApp a na - arụ ọrụ na - enye ohere maka nbudata nke ụdị ọhụụ a na - ewu ewu nke nwere ihe karịrị nde mmadụ abụọ na - arụsi ọrụ ike gburugburu ụwa kemgbe mmalite ya. Taa, anyị ga - egosi gị otu esi ebudata ma wụnye ya na ngwaọrụ gam akporo gị na obere usoro.
Maka nbudata anyị ga-abanye na peeji nke WhatsApp anyị ga-abanye na nsụgharị nke ikpo okwu gam akporo, pịa Download Ugbu a na ihe gbasara sekọnd anyị ga-enwe ya na folda nbudata nke ekwentị anyị maka nrụnye ọzọ.
Iji wụnye anyị ga-ekwe ka APKs gbanye n'ihi nche nke sistemụ arụmọrụ. Iji mee nke a anyị ga-enweta «Nchekwa» na Unknown isi mmalite anyị rụọ ọrụ ya, Google ga-agwa gị na ị na-gụrụ eziokwu na ya ọrụ ike na-ezi, ma cheta na ngwa APK bụ otu onye nke Google nyere Storelọ ahịa.
Ozugbo ịmechara usoro a, gbalịa ibudata ya ọzọ ma ọ ga-ekwe ka ọ rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu.
Nzọụkwụ mbụ nke nwụnye
Ozugbo ebudatara, anyị na-aga n'ihu ntinye nke APK na ekwentị anyị. Akara ngwa ahụ gosipụtara na desktọọpụ ngwaọrụ ahụ, pịa ya iji hazie ya ma zipụ ozi na listi ịkpọtụrụ gị.
Ozugbo ọ mepere, anyị ga-anakwere ọnọdụ nke ọrụ, pịa ịnabata maka nzọụkwụ ọzọ.
Nyochaa nọmba ekwentị gị. Ha ga-ezitere gị PIN ga-abanye na akpaghị aka. Pịa OK ma ọ bụ Ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere nkwado ndabere gara aga ma chọọ iweghachi ya, họta Weghachi, ma ọ bụghị zọọ usoro a.
N’ikpeazụ, tinye aha ma ọ bụ aha otutu ka ndị mmadụ mata gị. Nwere ike ịgbanwe aha ahụ ọtụtụ oge ịchọrọ na Ntọala nke ngwa ma emechaa, atụla ụjọ ma ọ bụrụ na itinyela ya na njọ.
Ozugbo itinyere aha ma ọ bụ aha nnabata, ị nwere ike ịgbanwe ndị enyi ma ọ bụ ndị maara gị ozi ọzọ.
GBWhatsApp bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma mara unofficial WhatsApp mods maka gam akporo. N'etiti ndozi ya bụ atụmatụ ọhụrụ yana ọrụ ndị ọzọ naanị na ntinye ya. Ntinye dị mfe ma ọ ga-ewe anyị naanị nkeji ole na ole iji ya.
N'ime ọrụ ya dị na ya bụ nke inwe ike zoo mkparịta ụka na ịpị dị mfe. Nhọrọ ọzọ bụ inwe ike ịgbasa ozi rue ihe ruru mmadụ 600 site na listi ịkpọtụrụ n'otu oge. Mod ahụ na-enyekwa anyị ohere ịhụchalụ ihe oyiyi na vidiyo na-enweghị ibudata ya na ngwaọrụ anyị.
Ọ nwere njedebe na-enweghị ngwụcha, ọ bụ otu n'ime ụdị mods kachasị mma ị nwere ike ịnwale na nke ị nwere ike iji nweta uru ọrụ niile nke onye nrụpụta gụnyere.
GBWassApp Pro kacha ọhụrụ na 2020
Developer: egosi TV
WhatsApp Aero bụ otu n'ime mods nke oge na-agaghị anọ. Ntinye na-anọchi anya mgbanwe dị mkpa, karịa ihe niile ọ na-emesi ike ịchọ mma ma na-enye nsonaazụ ọma. Ọ nwere ọrụ yiri nke ahụ na ndị ọzọ, mana ọ na-iche site na nhazi zuru oke nke ngwa WhatsApp gị ozugbo ị wụnye ya.
N'ime ọrụ ndị ọzọ ị nwere ike ịmara ndị mmadụ gara na profaịlụ gị, zoo ngosi na-acha anụnụ anụnụ nke ozi a na-agụ na mkparịta ụka, gbanwee ederede nke mkparịta ụka gị n'otu n'otu, zoo ọnọdụ nke Online, n'etiti nhọrọ ndị ọzọ
N'ime ọrụ na atụmatụ dịnụ bụ:
Ike njikwa nhọrọ nzuzo
Ohere ibudata isiokwu ohuru
Nhọrọ ndị ọzọ na nbudata faịlụ
Budata njikọ: Budata WhatsApp Aero
Uzo WhatsApp bu mod nke dabere na ngwa WhatsApp. Ọ-enye gị ohere iji hazie dum interface mfe na na ọtụtụ mmezi nhọrọ dị mgbe ị rụnyere ọhụrụ version. Nwere ike ịlele ekwentị ahụ akwụkwọ ahụaja dị ka interface ma ọ bụ hazie ya iji gosi gị ihe oyiyi ọzọ.
Dị ka aha ya na-egosi, Transparent WhatsApp na-eje ozi iji mee ka ngwa ahụ dị mfe ma ghara ịkụda ngwa ngwa. Tinye nza nke emoticons ọhụrụ na emojis iji mee ka mkparịta ụka gị bụrụ ihe ọchị. N'ime ọrụ ndị ọzọ dị mkpa iji gosipụta bụ inwe ike izipu faịlụ nke ihe ruru 1 GB ma ọ bụ karịa foto 100 ma ọ bụ onyonyo n'otu oge.
Mee ka WhatsApp dị n'efu
Otu okwu ahụ mere na mmeghari nke WhatsApp, ikekwe, n'ihi na ị meliteghị ụdị nke WhatsApp gị ogologo oge, ngwa ahụ na-arịọ gị ka ị megharịa ọrụ ahụ, agbanyeghị, ahora mee ka WhatsApp dị n'efu ruo mgbe ebighị ebiYa mere, ọ gaghị adị mkpa ka ị megharịa akaụntụ WhatsApp gị site na ịkwụ ụgwọ iji nwee ike iji ya mgbe niile. Ọ bụrụ na ngwa ahụ rịọ maka mmụgharị, ị ga-akpọtụrụ onye na-eweta ngwa gị melite WhatsApp, ma obu site na Google Play Store ma obu site na Apple App Store. Ọ dịbeghị mfe ma dị ọnụ ala iji WhatsApp dịka ọ dị ugbu a, yabụ were uru.